कलाकारहरु पनि शाहीकाे समर्थनमा,: ‘कु’टपिट र अवरो’धले ‘अभियानहरु’ सकिन्नन् कमरेड ! – ताजा समाचार
कलाकारहरु पनि शाहीकाे समर्थनमा,: ‘कु’टपिट र अवरो’धले ‘अभियानहरु’ सकिन्नन् कमरेड !
काठमाडौ। ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानका अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि नि’र्घा’त कु’ट’पि’ट भएपछि समाजिक संजाल तातेको छ ।
भरतपुरस्थित चौविसकोठीमा ‘भ’ष्ट्राचार, वेथिती र लु’टतन्त्रको विरोधमा नागरिक खबरदारी’ सभा गर्न लाग्दा स्थानिय प्रशासनले नदिएपछि होटल फर्कने क्रममा गाडीमै शाहीमाथि आ’क्र’म’ण भएको थियो । आक्रमणपछि अश’क्त घा’इते भएका ज्ञानेन्द्रको समर्थनमा सामाजिक संजालमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । ज्ञानेन्द्रमाथि आ’क्र’मण भएपछि केदार घिमिरे उर्फ माग्ने बुढाले ‘भ्रष्टाचारको बिरुद्ध बोल्नेलाई मुक्का । दुई तिहाईको उपहार केवल उखान टुक्का । लोकतन्त्रमा फरक मत’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसैगरि, दिपक राज गिरीले फेसबुकमा लेखेका छन् ‘आज पारसले पि’टे, ज्ञानेन्द्रले पि’टाइ खाए । पहिलो घ’टनाले सबै खुशि, दोश्रो मा कोहि खुशि कोहि दुखि ।’
हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेलले ‘कु’ट’पिट र अवरोधले ‘अभियानहरु’ सकिन्नन् कमरेड ! राजनैतिक र प्रशासानिक क्षेत्रको भ्र’ष्टाचार उखेल्दिनुस् न, बि’रोध र अराजकता आफैं ब’न्द हुन्छ नि । ज्ञानेद्र शाहीको प्रस्तुती र शैलीको बारेमा फरक मत होला । तर, उनको बि’रोधमा बाहुबलको प्रयोग र प्रबेश नि’षेधको राजनीति ग’लत हो । प्रश्नहरुको जवाफ राम्रा कामले दिनुपर्छ, कु’ट’पिट र अव’रोध गरेर हैन । नत्र के फरक भयो र !’ भन्दै आ’क्रो’श पोखेका छन्
सभालाई शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतका अभियान्ताहरुले सम्बोधन गर्ने बताइएको थियो ।
शाहीको टोली गाडीबाट आउने तयारीका लागि चौविसकोठीको होटल ग्लोबलमा मात्र के पुगेको थियो, युवाहरुको समूहले आ’क्र’मण र्गयो । हाइस गाडीमाथि ढुंगामुढा भयो ।
हातमा ढुंगा, इट्टा तथा रड बोकेका युवाहरुले शाहीलाई लक्षित गरी अन्दाधुन्ध हानेको गाडीमा रहेकाहरु बताउँछन् । ‘ढुं’गैढुं’गाले हा’न्यो, र’डले समेत हाने’ गाडीमा रहेका एकले भनेका छन् ।